Zimbabwe: Streets in Zimbabwe Capital Empty Following Deadly Protests - allAfrica.com
Zimbabwe: Streets in Zimbabwe Capital Empty Following Deadly Protests
Most businesses in Harare were closed January 14, 2019.
Life has come to a standstill in the Zimbabwean capital after violent protests over the government’s announcement of a massive hike in fuel prices turned deadly.
The streets of Harare were virtually empty Tuesday, with many businesses, banks and schools closed, after a call for a three-day strike by the Zimbabwe Congress of Trade Unions in response to an intensifying economic crisis.
Several people were killed when police in Harare and Bulawayo, Zimbabwe’s second-largest city, fired live ammunition at protesters, who threw rocks, burned tires and blocked streets. Authorities have not released an official death toll, but the Zimbabwe Association of Doctors for Human Rights tells the Associated Press that five people were killed in Monday’s unrest.
Zimbabweans are angry over President Emmerson Mnangagwa’s announcement last Saturday of a 150 percent rise in fuel prices.